Ungakusetha kanjani osebenza nabo emaphandleni endaweni elahliwe | Izindaba Zokuhamba
Ungakusetha kanjani osebenza nabo emaphandleni endaweni elahliwe
ESpain, izindawo zasemakhaya ziba nezinkinga ezinkulu zokuhlala kwabantu. Ukuthuthela ezindaweni eziningi zasemadolobheni kanye nabantu asebekhulile bashiye amanye amadolobhana nemizana ishiywe ngokuphelele, onqenqemeni lokunyamalala. Kodwa-ke, maqondana nalombono wokungabi nathemba, izinhlelo ziyavela abasunguli abafuna ukubuyisa laba bantu baphile futhi lokho kuqiniswe ngumkhuba okhulayo wabantu abafuna izindawo ezihlanzekile nezithulekile ukuze babalekele ukungcola nokushesha kwamadolobha.
El usebenza nabo kuyindlela ethokozisayo yokwakha amathuba emisebenzi ezigodini ezilahliweKungumsebenzi odlula ezokuvakasha futhi ongaba wusizo olukhulu ekusunguleni inani labantu, ukuvuselela umnotho wamadolobha, ukubenza baziwe, ukuwavulela amathuba amasha nokusiza ukuphindaphindwa kwawo. Kodwa ngaphambi kokuthi ngikutshele kanjani ukusetha osebenza naye emaphandleni, ake sithole ukuthi kuyini nokuthi kanjani ngqo usebenza nabo.
1 Kuyini ukusebenza ndawonye futhi kusebenza kanjani?
2 Kuyini ukusebenza nabantu basemaphandleni?
2.1 Izikhala zekhwalithi ziyatholakala
2.2 Umthombo ophindwe kabili wenani
3 Ungakusetha kanjani ukusebenzisana kwakho endaweni elahliwe?
3.1 Thola isikhala
3.2 Funda isikhala sakho
3.3 Cabanga ngesiphakamiso sakho senani
3.4 Dala isu lokuxhumana
3.5 Yiziphi izinqubo zomthetho okufanele ngizenze?
Yini futhi kanjani i- usebenza nabo?
El usebenza nabo kuyindlela yokusebenza lokho ivumela ochwepheshe abazimele ukuthi babelane futhi bathuthuke endaweni yokusebenza efanayo. Ngale ndlela, yize ngamunye esebenza kumaphrojekthi ahlukile, ngoba akudingeki nokuthi babe ngabenkampani eyodwa, ukusebenzisana phakathi kwabantu abanamakhono ahlukene futhi abavela emikhakheni ehlukene futhi se ikhuthaza ukwakhiwa kwamaphrojekthi ahlanganyelwe. Kepha ... Sihluke kanjani isikhala usebenza nabo kusuka ehhovisi okwabelwana ngalo noma esikhungweni sebhizinisi lendabuko? Ukuzungeze le filosofi yomsebenzi, umphakathi we osebenza nabo. Lo mphakathi uvame ukuphathwa yi- Umakhi womphakathi, umuntu ophethe ngokwazi iphrofayili yomsebenzi ngamunye osebenza naye futhi lokho kubaxhuma komunye nomunye ukondla, ngakho-ke, umoya walezi zikhala.
Kanjani i usebenza nabo? Kukodwa, ukusebenza kulula, ngoba akudingi ingqalasizinda eningi kakhulu ukukufaka. Izithako eziyisisekelo kungaba: ukuxhumana okuhle kwe-inthanethi, isethi yemithetho esungulwe ukuze kube nokuhlalisana kanye nendawo etholakalayo yokuyivulela abanye. Ngakho-ke, noma ngubani angafinyelela nge-laptop yakhe futhi ajoyine umphakathi. Eqinisweni, eziningi zalezi zinhlelo zivela emahhovisi akhona lapho kunendawo enkulu futhi umnikazi wawo anquma ukuyivulela abanye ochwepheshe futhi, nakwemibono yabo.
Kuyini ukusebenza nabantu basemaphandleni?
Enye yezinzuzo zezikhala usebenza nabo kungukuguquguquka abavumela ngokwendawo yabo. I- osebenza nabo sebenza futhi uxhumane nezinkampani zabo, uma kungenjalo ezizimele, ukude, ngakho-ke akudingeki ukuthi basebenze endaweni ethile. Khweza a usebenza nabo esigodini esishiyiwe sekuwumqondo ongenzeki nje kuphela, kepha osebenzayo Kungani amadolobhana alahliwe engaba yizindawo ezinhle ekusungulweni kwe- usebenza nabo?
Izikhala zekhwalithi ziyatholakala
Uma kukhona okuthile okusele emadolobhaneni anganakiwe, kuyisikhala. Yiba nendawo efanelekile yokuthola umphakathi usebenza nabo empeleni, bekungeke kube yinkinga. Ngaphezu kwalokho, kufanele kuvezwe ikhwalithi yalezi zikhala. Izindawo zasemakhaya zinezici ezingatholakali ezindaweni eziningi zasemadolobheni.
Okokuqala, i Intengo yomhlaba nezindlu ziphansi kakhulu, ngakho-ke lapho kwakhiwa okusha usebenza nabo imali yokuqala akufanele ibe phezulu kakhulu. Ngokolunye uhlangothi, ubunjalo bezindawo zasemakhaya bungakhanga kakhulu ochwepheshe abafuna ukusebenza endaweni ethule futhi engenamsindo. Ukuthula akuyona, kuphela inzuzo. Bamba iqhaza ku usebenza nabo indawo yasemakhaya izovumela osebenza nabo jabulela izikhala ezabelwana ngokuluhlaza nezicocekile ngesikhathi sakho sokuphumula. Le ndawo, efanelekile ukunqanyulwa, izosiza ukukhulisa umkhiqizo wabasebenzi futhi yakhe ubuhlobo phakathi kwabo, okungenye yezinjongo ezinkulu ze usebenza nabo.
Umthombo ophindwe kabili wenani
El usebenza nabo izindawo zasemakhaya ngeke nje zizuze abasunguli bazo futhi osebenza nabo ababamba iqhaza kuyo. Abantu badinga ngokushesha izindlela ezintsha zokubasindisa ekunyamalaleni. El usebenza nabo kuyindlela entsha yokuheha abantu abangahleliwe nokuvuselela amadolobhana angenalutho.
Yize kuliqiniso ukuthi, osebenza nabo abaya kulezi zikhala benza kanjalo okwesikhashana, imiphakathi iyashintsha, iyakhula futhi yondliwe ngabasebenzi abasha. Ngakho-ke, kuzungeze la mahhovisi akhethekile adinga ukuvela. Izindawo zokudlela, izindawo zokuzivocavoca umzimba, amahhovisi ezokuvakasha, abagqugquzeli bezindlela zokuhamba izintaba, izitolo, nezitolo ezinkulu ... Amabhizinisi amaningi ahlukahlukene angaba nendawo lapho enikeza izinsizakalo kule miphakathi. La mabhizinisi azoba nabasebenzi babantu abazothutha futhi abazohlala edolobheni. Ngakho-ke, akufanele sicabange ngalesi sikhuthazo njengokungathi besingumthombo womsebenzi kuphela walabo ababandakanyeka ngqo kuso. usebenza nabokepha njenge umthombo wenani lalo lonke idolobhana.
El usebenza nabo Inikeza isisombululo kwesinye sezinkinga ezinkulu ezibangelwa ukuvakasha ezindaweni zasemakhaya, i-temporal. Ukudala izakhiwo zokuhweba namanethiwekhi adingekayo futhi anenzuzo unyaka wonke. Masikukhumbule lokho ukusebenzisana Akuwona amahhovisi aqashwa ezinkampanini, futhi akuyona indawo yokuhlala izivakashi ehloselwe ukuhlela okuhlangenwe nakho kokuhlalisana kwebhizinisi, kuyizindawo ezenzelwe ukusebenzisana nokwenza ngcono umkhiqizo futhi ezihlala zisebenza unyaka wonke.
Ungakusetha kanjani ukusebenzisana kwakho endaweni elahliwe?
Uma ungathanda ukuhlala edolobhaneni elincane noma uzibuze ukuthi ungaphinde uwakhe kanjani, uma umbono we usebenza nabo okwasemakhaya kubonakala kuyindlela ethokozisayo, naka isifinyezo esilandelayo se- izinyathelo okufanele uzilandele ukusetha ezakho usebenza nabo zasemakhaya esigodini esilahliwe.
Sesivele sakugcizelela ukubaluleka kwesikhala futhi sakugcizelela lokho ku-a usebenza nabo kusebenza kubalulekile ukuba nesikhala esanele. Ngenhlanhla ikhona izici ezihambisana nemvelo yasemakhaya ezonikeza inani elibalulekile elengeziwe ngezikhala zakho. Ukukhanya kwemvelo okugcwele, ububanzi, ukuthula okudingekayo emsebenzini: lezi yizinto ezihlonishwa kahle ekusebenzeni osebenza kanye nemvelo yasemakhaya engakunikeza.
Uma umbono wakho wokusetha i- usebenza nabo Kuvela entandweni yokusiza ukuphinda kugcwaliswe kabusha kwedolobha lapho usuvele ungumnikazi wezindawo, usuvele uthuthuke kancane. Ngakolunye uhlangothi, uma umbono uvela ngoba ufuna amathuba obuchwepheshe kude namadolobha, kufanele wazi ukuthi kunezindawo ngisho nemizana yonke ethengiswayo nokuthi ungayithola, nge-inthanethi, ukuqala iphrojekthi yakho .
Funda isikhala sakho
Lapho uthenga umhlaba ukubeka i- usebenza naboImvamisa, uhlaziya leso sikhala ngaphambi kokusithola. Ngaphambi kokuthenga, uqinisekisa ukuthi imibandela ilungile ukuletha umbono wakho ekusebenzeni. Kepha uma usuvele unendawo kusukela ekuqaleni, kubalulekile ukuthi uyifundele qaphela amandla akho nobuthakathaka bakho. Kumele uzibuze ukuthi lesi sikhala singaba nomthelela muni kulabo abayingxenye yaso futhi ubone ukuthi siveza ziphi izinkinga nokuthi yiziphi kulezi zinkinga ezingaxazululeka. Lokhu kuhlaziywa kuzokusiza futhi nquma ukuthi izithameli zakho ezihlosiwe zizoba yini. Uma usuyicacisile, kuzoba lula kakhulu kuwe ukuthi uguqule isikhala sakho sivumelane nezidingo zakho.
Yize kunezinzuzo eziningi zokusetha lezi zindawo zokusebenza edolobhaneni noma edolobheni, akuyona yonke into enhle. Ukufinyeleleka iyimfuneko ebalulekile ye- usebenza nabo iyasebenza hhayi wonke amadolobha anenethiwekhi yezokuthutha entofontofo futhi esebenza kahle. Ukuxhumeka kwe-inthanethi Leli elinye iphuzu elibalulekile futhi, yize inethiwekhi iya ngokuya iba yimbulunga yonke, kusekhona izindawo lapho ukuxhumana nokutholakala kuhamba kancane noma kungazinzile. Ekugcineni, izimo zemvelo bangenza futhi kube nzima ukuthi iphrojekthi isebenze. Uma idolobhana noma idolobha okukhulunywa ngalo lisendaweni ekude kakhulu noma enezimo zezulu ezimbi kakhulu, kufanele ukubheke lokhu lapho ulungisa kahle izikhala futhi uqinisekisa ukuthi kukhona okuhlinzekwayo.
Cabanga ngesiphakamiso sakho senani
Uma unikeza osebenza nabo awuqashi amatafula ehhovisi ukuze wabelane ngezindleko, unikeza isikhala lapho uzothuthukisa ukwakhiwa kwamanethiwekhi, imibono kanye namaphrojekthi ajwayelekile. Ngakho-ke, akwanele ukusetha indawo bese uyikhangisa ekhasini lewebhu. Uma okufunayo ukuqala ngale filosofi yomsebenzi, kufanele unikeze enye into. Kubalulekile ukuchaza ukuthi yini eyenza i- usebenza nabo ezasemakhaya isiphakamiso esikhangayo nokuthi, kuzikhungo zayo, uzokhuthaza kanjani ukusebenzisana kanye nokuvela kwamathuba amasha.
Ngakho-ke, ngaphambi kokuqala, kufanele chaza ngokucacile ukuthi yini eyenza isiphakamiso sakho sikhetheke, ngoba wena usebenza nabo ezasemakhaya zingazuzisa ikusasa lakho osebenza nabo nokuthi izoyondla kanjani imiklamo yayo ezimele (ngoba ayifuni nje ukudala amaphrojekthi afanayo).
Dala isu lokuxhumana
Kodwa-ke, akwanele ukucacisa ngamandla we usebenza nabo. Kubalulekile ukuthi kwakho abathintekayo yazi iphrojekthi yakho. "Okungaxhunyaniswanga akukho" futhi leyo yinto okufanele uyisebenzise ku- usebenza nabo zasemakhaya. Akusizi ngalutho ukuba nezinsizakusebenza ezihamba phambili, isikhala esihle kakhulu noma imibono emihle uma ungakwazi ukutshela abanye ukuthi uyini umoya wesiphakamiso sakho.
Ngakho, ukuxhumana nomphakathi kuzoba umlingani wakho omkhulu ukwazisa nokwazisa i- ukusebenza ngonyawo Kodwa-ke, isu lakho lokuxhumana akumele ligcine ekukhangiseni noma ebukhoneni bokuxhumana kumanethiwekhi. Kumele dala umkhiqizo ukukhuthaza, ngesithombe sakho nobunikazi bakho. Kufanele ubekhona njalo ekuxhumaneni nomphakathi futhi wakhe iwebhusayithi ekhangayo ebekwe ezinjini zokusesha. Okuqukethwe okusabalalisa kumaphrofayili akho kumele kube okuqukethwe okubalulekile. Kufanele unikele ngaphezu kwezikhangiso uma ufuna ukuthi babe nentshisekelo kufayela lakho le- ukusebenza ngonyawo Ukusabalalisa ngefilosofi ye ukusebenzisana izindawo zasemakhaya, mayelana nokuthi impilo injani emzaneni noma wabelana ngokuthi isikhala sakho sisebenza kanjani nsuku zonke, kungumbono omuhle wokusondeza iphrojekthi yakho emphakathini.
Yiziphi izinqubo zomthetho okufanele ngizenze?
Un usebenza nabo ezasemakhaya ibhizinisi ngakho-ke ukuyifaka udinga ukusungula uhlelo lwebhizinisi futhi unamalayisense athile. Uhlelo lwebhizinisi luyasungula uma ngabe iphrojekthi yakho isebenza noma cha nokuthi uma unezimali ezanele ezakho zokuyiqala. Ngokuqondene namalayisense, kungenzeka ukuthi ingenye yezinkinga ezikunikeza ikhanda kakhulu. Eqinisweni, ayikho ilayisense ethize yalolu hlobo lwendawo, kuzoncika ngokuyisisekelo ohlotsheni lwemisebenzi ezokwenziwa kulo. Qaphela ukuthi izinqubo zibalulekile nokuthi kuzofanele unikele ingxenye yotshalo-mali lwakho nesikhathi sakho Iba nesi qiniseko ukuthi ibhizinisi lakho lihlangabezana nazo zonke izidingo zomthetho.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba Zokuhamba » General » Ungakusetha kanjani osebenza nabo emaphandleni endaweni elahliwe